ओमकार टाइम्स आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनमा हजारौ सडकमा उत्रिए , मन्त्रीको होस् उड्यो ! – OMKARTIMES
आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनमा हजारौ सडकमा उत्रिए , मन्त्रीको होस् उड्यो !
काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको प्रावधान विपरित लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन निकाल्न भनेपछि राजीनामाको मागसहित काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ ।
मन्त्री पण्डितको राजीनामा माग गर्दै मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा हजारौ सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरिएका छन् ।
आजको मौसम : वर्षा हुने सम्भावना